ग्रान्डी अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु
15 July 2016 अनलाइन
काठमाडौंको ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालीकाका रविन लामाको शरिरमा उहाँकी बहिनी उमा लामाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेर अस्पतालमा सेवा सुरु गरेको हो ।
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण शुरु
काठमाडौंको धापासी स्थित ग्रान्डि अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण शल्यकृया सफलता पुर्वक शुरु भएको छ । नेपालका दक्ष तथा अनुभवि डाक्टरहरुको टिम रहेको यस अस्पतालले गत असार २७ गतेदेखी मृगौला प्रत्यारोपण शल्यकृया शुरु गरेको हो ।
ग्रान्डी अस्पतालमा अब मिर्गौला प्रत्यारोपण, यस्तो छ शुल्क
काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ ।
ग्रान्डी अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण थालियो
काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सुरु भएको छ । दक्ष तथा अनुभवि डाक्टरहरुको टिमले गत असार २७ गतेदेखि मृगौला प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सुरू गरेको हो ।
ग्रान्डि अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सुरु
काठमाडौँको धापासीस्थित ग्रान्डि अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण शल्यकृया सफलतापुर्वक सुरु भएको छ । अस्पतालले गत असार २७ गतेदेखि मृगौला प्रत्यारोपण शल्यकृया सुरु गरेको हो । अस्पतालमा पहिलोपटक काठमाडौँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका रबिन लामाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको थियो । उनलाई आफ्नै सहोदर बहिनी उमा लामाले मृगौला दान गरेकी थिइन् ।
ग्राण्डीले थाल्यो मिर्गौला प्रत्यारोपण
राजधानीको धापासी स्थित ग्राण्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु गरेको छ ।
12 July 2016 अनलाइन
मेनुपज अर्थात् रजश्वला सुक्ने संक्रमणकाल, यी हुन् लक्षण र समाधानका उपाय
07 July 2016 अनलाइन
मेनुपज उमेरजन्य कारणले महिलाको स्वास्थ्यमा देखिने सामान्य परिवर्तन हो । औसतरुपमा ४० वर्ष नाघेका महिलामा मेनुपज हुन्छ । यसका लक्षण पनि व्यक्तिअनुसार फरक हुने गर्छ । त्यसैले मेनुपजबारे बुझ्न अत्यावश्यक छ ।
मोतिविन्दुः निको हुने अन्धोपन
05 July 2016 अनलाइन
मोतिविन्दु भनेको आँखाको नानी वरपर देखिने सेतो बादल अथवा सेतो धब्बा हो । जब हामी कुनै वस्तुलाई हेर्छौं, प्रकाशका किरण हाम्रो आँखाको नानी हुँदै रेटिनासम्म पुग्ने गर्छ । प्रकाशका किरण रेटिनामा पुग्नको लागि नानी सफा तथा पारदर्शी हुनुपर्छ ।
24 June 2016 टेलिभिजन
आँखाको रोग जलबिन्दुबारे थाहा पाउनुपर्ने कुरा
20 June 2016 अनलाइन
डा. प्रेरणा कंशाकार
जलबिन्दु एक किसिमको आँखाको रोग हो । यसले आँखाको दृष्टि सम्वन्धि स्नायु (अप्टिक नर्भ) मा क्षति पुर्याउँछ । जलबिन्दुको प्रारम्भिक चरणमा केहि लक्षणहरुमात्र देखिने वा कहिलेकाँही कुनैपनि लक्षण नदेखिने पनि हुनसक्छ ।
18 June 2016 टेलिभिजन
शुभतारा स्कुलमा ‘स्माइल डेन्टल क्याम्प
16 June 2016 अनलाइन
काठमाडौँ १ असार – धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आज राजधानीको सानेपास्थित शुभतारा स्कुलमा ‘स्माइल डेन्टल क्याम्प’ गर्यो ।
भारतमा नेपाली डाक्टर प्रथम
13 June 2016 अनलाइन
काठमाडौ– भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको एक पेपर प्रिजेन्टेसनमा नेपाली डाक्टर प्रथम भएका छन् । ‘वल्र्ड स्पाइन ७’ को उक्त प्रतियोगीतामा न्युरोलोजिष्ट डा अमित थापा पहिलो भएका हुन् । ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटलका कन्सल्ट्यान्ट न्युरोसर्जन थापाले स्पाइनलको हड्डीमा कम भन्दा कम क्षति पुर्याएर कसरी त्यहाँको ट...
ग्रान्डी अस्पतालका न्युरोसर्जन डा. अमित थापालाई भारतमा प्रथम पुरस्कार
भारतको नयाँदिल्लीस्थित गुडगाँउमा हालै सम्पन्न ‘वर्ल्ड स्पाइन सेभेन’ स्नायु विशेषज्ञको सम्मेलनमा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा कार्यरत नेपाली न्युरोसर्जन डा. अमित थापालाई प्रथम पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिएको छ ।
10 June 2016 बिज्ञापन / प्रबर्धन
बरिष्ठ संगीतकार अम्वर गुरुङको निधनपछि ग्रान्डि अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे सँगको कुराकानी सहितको बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानीपख ।
08 June 2016 रेडियो
अम्वर गुरुङको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन
04 June 2016 अनलाइन
२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय गानका संगीतकार तथा संगीत तथा नाट्यकला प्रतिष्ठानका प्रथम कुलपति अम्वर गुरुङको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै ग्रान्डी अस्पतालमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।
01 June 2016 न्यूजलेटर
हाई ब्लडप्रेसरः जनमानसमा व्याप्त भ्रम र वास्तविकता
27 May 2016 अनलाइन
डा. मिलन प्रकाश श्रेष्ठ
बढ्दो आधुनिकिकरणसँगै संसारमा कति राम्रो नतिजाहरु पनि पाएका छौं भने नयाँ नयाँ समस्या पनि उत्पत्ति हुँदै गएको छ । यस्तै मध्ये एक हो ब्लडप्रेसरको समस्या । कुनै समयमा आक्कलझुक्कल मात्र देखिने ब्लडप्रेसरको समस्या अहिले प्रशस्तै देखिन थालेको छ ।
20 May 2016 पत्रपत्रिका
ग्रामीण परिवेशको गरीब परिवारमा हुर्केका अर्थोपेडिक सर्जन डा. चक्रराज पाण्डेको एउ...
वायु प्रदुषणले नाकमा मासु पलाउन सक्छ, बच्ने कसरी ?
16 May 2016 अनलाइन
वायु प्रदुषणका कारण स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ । स्वासप्रश्वास, छाती, एलर्जी लगायतका समस्या मात्रै होइन, नाकमा मासु पलाउने समस्या पनि वायु प्रदुषणकै कारण हुन्छ ।
थायराइडको लक्षण र कारणहरु
13 May 2016 अनलाइन
© २०२० ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल